Aleo ny tantara hitsara | NewsMada
Aleo ny tantara hitsara
Par Taratra sur 28/03/2019
Fomba fiteny mahazatra hatramin ’izay ny hoe: ny tantara no mitsara. Mba marina? Misy ny miandry ny tantara hitsara… Mitsara ny teo aloha sy ny ankehitriny ve, ohatra, ny tantara, raha ny “Raharaha 29 marsa 1947”? Hatramin’izao, tsy fantatra be ihany ny marina. Na mbola tsy mampifanatona, tsy mampiombona…
Amin’izany, mbola mila fanadihadiana lalina sy maharitra ny raharaha, indrindra amin’izao hoe efa misokatra ny tahirin-kevitra momba izany. Mba ho hita ahay ny tena marina fa samy mety misy manana ny marina kely any aminy avy any ireo tsy mitovy fijery. Arakaraka ny toerana misy ny tsirairay io.
Ny manahirana, saika mbola hifampiampangana ny raharaha. Tsy hoe ny tantara dia tantara? Na aleo samy hotsarain’ny tantara amin’ny ataony avy ny tsirairay… Inona no ndeha hifandirana amin’izany? Aleo hadihadina sy havoaka hatrany ny marina; amin’izay, hiaraha-mahita eo: inona na ny an’iza no marina?